BBC Oo Uu Ka Geeriyooday Weriyihii Labaad Muddo Bil Ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Suxafiyad ka mid ahayd kuwa ugu fir fircoon dhinaca dumarka oo ka shaqaynaysay Idaacada BBC-da oo lagu magacaabi jiray Anne Waithera ayaa ku geeriyootay Cusbitaal ku yaalay Magalada Nairobi, ee caasimadda dalka Kenya.
Anne Waithera ayaa u geeriyootay cudurka Kansarka (cancer) oo hayay labadii sano ee ugu dambeeyay, waxeyna ku geeriyootay isbitaal ku yaal Nairobi.
Waxay ka soo shaqeysay warbaahinta Media House oo ka mid ah kuwa Afrikada bari ugu horreeya, kooxda Nation Media iyo TV-ga Citizen oo ay wararka ka sii deyn jirtay.
Waxay ahayd weriyihii ugu horreeyay ee labo luuqadood ku hadla ee BBC uga soo warrama magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Waxaa saaka tacsi laga dareemayay xafiiska Nairobi iyadoo asxaabtii ay wada shaqeyn jireen ay isku deyayeen inay la qabsadaan wararka ku saabsan geerida Anne.
Dad badan ayaa tacsi u diray qoyska iyo saaxiibbada Anne oo ay ku tilmaameen qof naxariis badan, raxmad leh doorna ka qaadan jirtay hawsha koox ahaaneed oo si weyn looga tebi doono.
Muddo daqiiqad ah ayaa la aamusay shaqaalaha xafiisyada BBC Afrika ee Nairobi, London, Dakar and Abuja si loo qaddariyo Anne.
Maamulaha xidhiidhka caalamiga ah ee BBC, Razvan Scortea, waxaa uu sheegay inuu aad uga naxay geerida Anne oo uu sheegay inay ahayd qof wanaagsan, oo soo baxaysa, oo dabeecad fiican leh.Wuxuuna u rajeeyay in Ilaahey u naxariisto.